FAO: Tirada Soomaalida Tabaaleysan way Yaraatay
War saxaafadeed ay wadajir u soo saareen Ururka Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee FAO iyo Xubinta Sugnaanta Cuntada iyo Nafaqada ee Somalia (FSNAU) ayaa lagu xusey in tirada dadka ku tabaaleysan Somalia ay mareyso meeshii ugu hooseysey tan iyo markii abaaro ba’an ay dalka ku dhufteen sannadkii 2011ka.
Sida ku xusan warbixintan hoos u dhaca dadka tabaaleysan ayaa waxaa loo nisbeynayaa roobabka oo si wanaagsan u da’ay xiliyadii loogu talagaley, qiimaha cuntada la siisto oo hoos u dhacay iyo gargaarka aadminimo oo si habsami leh loo gaarsiiyey goobaha ay baahida ka jirtey.
Laakiin waxay hay’adahan dhanka kale sheegayaan in ay weli jiraan kumanaan caruur Somali ah oo la il daran xaalad nafaqo darro oo aad u sareysa, gaar agaan goboladda Koonfureed, sida ku cad natiijada sahan ay sameeyeen labadan hay’adood.
Inta u dhexeysa bisha August ilaa December 2013, qiyaastii 870,000 oo qof ayaa waxaa wajihi doonta xaalad u baahan in gargaar degdeg ah loo fidiyo , tiradaasina waxay si aad ah uga yar tahay sannadkii 2011ka oo markii abaar xun ay ku dhufatey dalka ay jireen ilaa 4 milyan oo qof oo u baahnaa in gargaar degdeg ah loo fidiyo.
Horaantii sannadkan dadka Soomaalida ee u baahnaa gargaarka degdegga ah waxay gaarayeen in ka badan hal milyan oo qof. Roobabkii Gu’ga ayaa si wanaagsan u da’ay inta badan gobolada dhul beereedka Somalia, waxaana jira dalagyo aad u badan oo soo go’ay bilihii July iyo August iyo xoolaha nool oo iyaguna si weyn ugu diirsadey roobabkaasi iyo barwaaqada jirta.
Hase yeeshee, waxaa Xubinta sugnaanta Cuntada iyo Nafaqada ee Somalia iyo FAO ay sheegayaan in ku dhowaad laba milyan iyo 3 boqol kun oo Soomaali ah xaaladooda lagu tilmaami karo mid aan fadhiyin oo ay dhici karto in xaalad cunto yari ay soo wajahdo, waayo waxaa ay dhib badan ka maraan sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda.
Goobaha ay sida ba’an weli uga jiraan nafaqo darada ayaa waxay hay’addu ku tilmaantey inay ka mid yihiin Koonfuurta iyo bartmaha Somalia, iyo weliba xeryaha dadka soo barakacay. Carruurta ay sida ba’an xaaladan u aafeysey ayaa tiradooda ay ka badan tahay 206,000 oo da’doodu ay ka yar tahay 5 sanno.
Degaanka Sool ee Waqooyiga Somalia ayaa iyana laga cabsi qabaa in bisha October ay xaaladda biyo yaraan ka sii darto, taasoo horseedi karta in ay xoolaha ay haystaan iyo lacagta ay ku bixiyaan ay ku iibsadaan biyaha.